Chimiro 1GS Rigid Kubatanidza
Grooved couplings inoiswa kumanikidza kwemukati uye ekunze kukotamisa masimba panguva yebasa. ASTM F1476- 07 inotsanangura kuomarara kwakabatana sekubatana uko pasina iko kunowanikwa kwemahara angular kana axial pombi kufamba uye kubatika kunochinja sechibatanidzwa uko kunowanikwa.
mashoma angular uye axial pombi kufamba.
Chimiro 1GH Heavy Duty Rigid Kubatanidza 500Psi
Iko rinorema basa rakakombama coupling rakagadzirirwa kushandiswa mune akasiyana siyana akajairwa mapombi
ezvemwero kana zvakamanikidza masevhisi. Kushanda kumanikidza kunowanzo regedzwa nehukuru hwemadziro uye kuyera kwepombi iri kushandiswa. Iyo Model 7707 coupling inoratidzira kuchinjika iyo inogona kugadzirisa kusarongeka, kukanganisa, kupisa kwemhepo, kudedera, ruzha uye kudengenyeka kwenyika. Iyo Model 7707 inogona kunyange kugadzirisa arced kana yakakomberedzwa mapaipi dhizaini
Heavy Duty Zvichienderana payakabatanidzwa 1000Psi
Iyo modhi inorema basa inoshanduka kubatanidza 1000 Psi yakagadzirirwa kushandiswa mumhando dzakasiyana siyana dzekupomba dzeshure iyo inogona kugadzirisa kusanzwisisika, kukanganisa, kupisa kwemhepo, kudengenyeka, ruzha uye kudengenyeka kwenyika. Iyo Model 1000 inogona kunyange kugadzirisa arced kana yakakomberedzwa mapayipi dhizaini.
Heavy Duty Zvichienderana payakabatanidzwa 500Psi
Chimiro 1NH chinorema basa chinja chinobatanidza chinopa chinongedzo chinongedzo neiyo gaka pakati pepombi groove uye yekubatanidza kiyi.
Dhizaini yakasarudzika inobvumira kufamba kweaxial uye radial, inokodzera pombi ine shanduko iri pasi pekumanikidzwa kwepakati.
• Muviri unovandudzwa unopikisa kanokwana kana kumanikidza kushanda.
Chimiro 321 kupatsanura flange kunyanya kushandisa kune iyo flange kubatana nevhavha, zvishandiso kana pombi kutendeuka kubatana kugadzirisa iyo groove kubatana uye flange yekubatanidza kutendeuka, kumisikidza kuri nyore uye nekukurumidza
Isu (CNG) tinopa Flange Adaptor.Flange Adapter inonyanya kushandisa kune iyo flange kubatana nevhavha, zvishandiso kana pombi kutendeuka kubatana kugadzirisa iyo groove kubatana uye flange yekubatanidza kutendeuka, kumisikidza kuri nyore uye nekukurumidza.
Pipe flange inzira yekubatanidza pombi, vharuvhu nepombi pamwe chete negirosa, welded, kana screwed mhando. Inopa mukana uri nyore wekumisikidza, kuchenesa uye kugadzirisa iyo inodonha yakasimba dhizaini.
Grooved flange inoshandiswa pakubatanidza pombi yekudzivirira moto yekuendesa mvura uye yekudzvanyirira mumiriri mukumisikidza nekukurumidza.
Iyo flange adapta inopa shanduko yakananga kubva kuHDPE pombi uye kana fittings kune ANSI Kirasi 125 kana 150 flanged zvikamu.
ANSI Kirasi 125 & 150 uye PN16 giredhi flanges anowanikwa kwese kwese, iine DN50 kusvika DN80 (2 kusvika 3) kune ese PN10 mazita ekuti flanges; DN100 kusvika DN150 (4 kusvika 6) kune ese maviri flanges PN10nominal giredhi flange.
Kuwedzera kune akajairwa maflanges akatsanangurwa pamusoro, iri zvakare kuwanikwa kupa flanges pasi pemamwe matanho akadai JIS 10K uye ANSI Kirasi 300.
Chimiro 90DE 90 ° Dhonza Elbow
Isu (CNG) yekupa chimiro 90DE 90 ° Elbow. Iwo anoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi muhukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa. Isu tinopa grooved pombi fittings yemoto kurwisa system.
Isu (CNG) yekupa dhizaini 90RT 90 ° Kuderedza Elbow ine Threaded Diki End (Wedzera-kapu). Iwo anoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi muhukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa.
Chimiro 130 Grooved Tee Standard Radius
Isu (CNG) tinopa 130 Grooved Tee Standard Radius. Iyo yakabatana nekubatanidza uye inoshandira pamwe nemumwe. Iyo inoshandiswa munzvimbo panoshanduka dhayamita yemapaipi emoto ayo anonyanya kushandiswa mumvura yekuparadzira sisitimu uye sisitimu yemvura yemoto. Iyo yakanyorwa ne Underwriters Laboratories e FM Yakatenderwa Isu tiri kutarisira kutanga kwenguva refu bhizinesi hukama newe.
Isu (CNG) tinopa 131N Threaded Kuderedza Tee. Iwo anoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi muhukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa.
Maitiro Grooved Kuderedza Muchinjikwa
Isu (CNG) tinopa Grooved Kuderedza Muchinjikwa. Iwo anoshandiswa kubatanidza Standpipe kudzora, kugovera, kana kutsigira pombi muhukuru hwakasiyana kana mafambiro. Ne groove kubatanidza, nguva yeprojekti inochengetwa zvakanyanya nekumisikidza nekukurumidza uye nyore kugadzirisa. Isu tinopa grooved pombi fittings yemoto kurwisa system.